QM oo sheegtay in inkabadan Hal-Malyan oo Somali ah ay baahanyihiin | raascasayrmedia.com
← Wax garadka magaalada Baargaal ee xarunta gobolka Binna ee maamul goboleedka Raascasayr State oo amaanay wax qabadka madaxda maamulkaas
War degdega: Dagaal Ka Bilowday Bartmaha Magaalada Gaalkacyo →
April 27, 2011 · 6:38 pm
QM oo sheegtay in inkabadan Hal-Malyan oo Somali ah ay baahanyihiin
Jimciyadda Qurumaha ka dhaxaysa ayaa sheegtay in inka badan Hal-Malyan ruux oo Soomaalia ah ay u baahan yihiin in gar gaar bini’aadanimo oo deg deg ah loo fidiyo.
Sida ku xusan warbixin ay si wada jir ah u soo saareen ilaa 3-Hay’adood oo hoostaga Qaramada Midoobay oo ay ugu horeyso Hay’adda Cunada iyo beeraha u qaabilsan QM ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano FOA ayaa lagu sheegay in 2.4 Milyan oo dad Soomaaliyeed ah ay u baahanyihiin gar gaar bini’aadanimo.
Warbixinta ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in abaaraha iyo colaadha ka jira dalka Soomaaliya ay ku barakaciyeen gudaha Soomaaliya ilaa 50-kun oo qof halka kumamaan kale la sheegay inay isaga carareen dalka islamarkaana ay miciin bideen wadamada dariska la’ah Soomaaliya.
Abaaraha ka jira dalka Soomaaliya ayaa wxaa ay sababeen in uu sara u kac ku yimaado qiimaha lakala siisto biyaha iyo Raashiinka taasi oo ay ku adagtahay sida la sheegay qoysas farbadan oo Soomaali ah.
Warbixinta ayaa intaasi lagu daray in xiliyadii Roobka lasugayay oo gabi ahaamba baaqday sanado is xig xigga Xaaladda dalka Soomaaliya ay ka dhigtay mid aad u xun, iyadoo sida la tilmaamay taasi ay sababtay inay galaafato nolosha dad iyo duunyo aad u farabadan oo ku noolaa qeybo ka mid ah dalka Soomaaliya.
Dalka Soomaalida oo haatan lagu tilmaamo wadama ugu xun oo ay ka jiraan xaaladaha xaaladaha nolol xumo ayaa hadana Hay’adaha Waxaa ay ka digeen hadii aan wax laga qaban dhibaaatooyinka kasoo socda dalka Soomaaliya ay keeni karto mid ka daran midda haatan ay ku sugan yihiin dad badan oo Soomaaliyeed.
Comments Off on QM oo sheegtay in inkabadan Hal-Malyan oo Somali ah ay baahanyihiin